Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Rishtey Ee Anil Kapoor Qiimaha Aabo Nimada Kumuujiyay!! – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Rishtey Ee Anil Kapoor Qiimaha Aabo Nimada Kumuujiyay!!
December 6, 2017 Ali Aadan
Waxaa maanta ookale 6 Dec sanadkii 2002 la daawaday filmka dareenka jaceyl ee lamaanaha iyo midka aabahaba lagu soo bandhigay ee Rishte.
Rishtey (Xiriir) wxaa hogaamiyaal ka ahaayen xidigaha kala ah Anil Kapoor, Karisma Kapoor iyo Shilpa Shetty waana filmka dhanka Box-officeka ka guuldarestay balse bandhiga hogaamiyaasha aad loo amaanay.
Waxaa filmkaan Director iyo maalgaliyeba ka ah Indra Kumar wuxuuna noqday film Flop ah ama film guuldarestay ganacsi ahaan.
Fadlan Halkaan Kaga Bogo Xaqiiqooyin U Gaar Ah filmka Rishtey:
Xaqiiqada 1aad: Aishwarya Rai Bachchan ayaa markii hore ahed dooqa koowaad ee doorka Komal SIngh ee Karisma filmkaan kujishay balse waxaa calafkaas iska lahaa Karisma oo doorkas kaga yaabsatay dadweynaha.
Xaqiiqada 2aad: Anil Kapoor ayaa fikrad keenay wuxuuna usheegay filmsameye Indra Kumar fikradaas oo ahed in atiriishada labaad ee filmkaan laga dhigo Preity Zinta balse Preity wey iska diiday doorkas atiriishada labaad ah ugu dambena Shilpa Shetty ayaa atiriisho labaad ka noqotay filmkaan.
Xaqiiqada 3aad: Karisma Kapoor horey ayee Anil Kapoor ula soo shaqeysay maadama ay lasameysay filmka Andaz kaaso ay Karisma atiriisho labaad ka ahed maadama Juhi Chawla atiriisho koowad ka ahed filmkaas.
Xaqiiqada 4aad: Waa filmkii ugu horeyay oo ay Anil Kapoor iyo Karisma Kapoor hogaamiye ka noqdaan abid.
Xaqiiqada 5aad: filmkaan markii hore waxaa loogu dhawaaqi lahaa Rishta balse markii dambe Indra Kumar ayaa goaansaday in magaca loo bedelo Rishtey inkasto farqi saas uweyn udhaxenin labada magac.
Xaqiiqada 6-aad: Shilpa Shetty ayaa u tartantay atirisho caawiso mida ugu wanaagsan ee shirkada Filmfare Awards bixiso (Best Supporting Actress – Shilpa Shetty).
Xaqiiqada 7-aad: Waxay ahayd markii labaad oo ay Karishma iyo Shilpa filim isla jilaan ayagoo horey uga soo wada muuqdeen filimkii Jaanwar (1999) Akshay Kumar hogaamiye kahaa.
Sidoo kale Karishma walaasheed Kareena iyo Shilpa walaasheed Shamita Shetty ayaa iyagana sanadii 2005 isla jileen ama kasoo wada muuqdeen filimkii Beewafa.
Waxaa Aqrisay 816
Xageed Kasoo xigataan Mawduucaan
Xaqiiqoyinka ugaarka ah aflaanta
Xogaha waan isku soo aruurinaa oo baaritaan ayay u baahan tahay shabakad gaar ah kuma diiwaan gashano badankooda inkastoo IMDb iyo Wikipedia laga helaayo xaqiiqooyinka gaar balse juhdi badan ayaan galinaa filimada xogtooda inaan raadino.
duqa xaafada says:
filimka bewafa soo maha kan akshay kumar atooraha ka yahay ee ay la wadan kareena kaboor,anil kaboor iyo shushmita singh gabadha shilpa la dhalatay filimkas door nooce ah ayy ku leedahay hadii uu filimku kaa yahay
Hadii aan qaldaneyn Manoj Bajpayee ayay saaxiib la tahay qaybaha dambe filimka ayay ku jirtaa, weliba Manoj Bajpayee waa midka xiriirka qarsoon ka dhaxeeyo Akshay iyo Kareena banaanka usoo saarayo ee Anil Kapoor garabka siinayo.